Sarimihetsika Indiana azo asolo: Nanaiky ihany ny handray ny fahasamihafàna ara-kolontsaina ve ny Netflix? · Global Voices teny Malagasy
Netflix, ahitàna kazarana sarimihestika sy mpijery isankarazany ireo andian-tsarimihetsika indiana
Voadika ny 10 Jona 2021 2:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Português, srpski, Français, عربي, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsary Youtube fampahafantarana an'ilay andian-tantara Taj Mahal 1989.
Tsy isalasalana fa nahazo tombony tamin'ny fisian'ilay valanaretina ireo sehatra iraisampirenena fandefasana sarimihetsika satria ny fihibohana tany amin'ny ankamaroan'ny firenena maro dia nanery ny hikatonan'ireo trano fandefasana sarimihetsika, ary nanery ny olona hijanona an-trano sy hamorona ny fandaharam-potoanan'izy ireo manokana amin'ny resaka fialamboly. Iray amin'ireo tena nahita fahombiazana ny Netflix, nahasintona mpijery 37 tapitrisa vaovao tamin'ny 2020, ary tsy ny fandefasana fotsiny ihany fa mamokatra ihany koa ny andian-tantara, sarimihetsika sy fanadihadiana azy manokana.
Fa raha nahita fitomboana be erantany teo amin'ny resaka mpanaraka azy, tamin'ny tantarany manontolo ny Netflix, toy ireo mpifaninana aminy HBO, Amazon Prime Video, Apple TV sy ny maro hafa, dia mbola voafetra ho an'ny Tandrefana aloha ary indrindra indrindra fa ny Anglisy. Kanefa misy fikisahana mipoitra ka ankehitriny ilay sehatra, toy ireo hafa ihany koa, dia manolotra karazany maro mivelatra mankany amin'ireo votoaty tsy amin'ny fiteny anglisy, novokarina na notontosaina tany ivelan'ny tontolo Tandrefana.
Azia Atsimo no faritra iray nahita maso ny fitomboan'ny fisoloantena sy maro loko kokoa. Ary na manohy mamokatra sy mandefa ireo fitsaràna an-tendrony ataon'ny Tandrefana an'i Azia Atsimo aza ny Netflix, toy ilay sarimihetsika gidragidra “Extraction”, dia nisokatra ihany koa ho amin'ireo sarimihetsika marobe izay samihafa amin'ireo vokarin'ny indostria Bollywood, ary mamela ny hisian'ny fahamaroam-piteny, fitantarana ary karazana tsy mbola hita hatrizay.
Mba hahatakarana io fironana io, niresaka tamin'ny Global Voices i Shumona Sinha, safiotra Bengali-Frantsay mpanoratra, izay nahazo fankasitrahana iraisampirenena tamin'ny alàlan'ilay asa sorany “Knock down the poors! [Akarapohy any ireo mahantra!]. Sinha, toy ireo olompirenena marohafa niaritra ny mafy noho ny fihibohana an-trano tany aminy tao Frantsa, dia afaka niverina nifandray tamin'ny hatanoràny tany Bengal tamin'ny alàlan'ireo andian-tantara indiàna sy ireo sarimihetsika, izay tsinjony ho toy ny fiovàna mahafinaritra ao anatin'ny famokarana sarimihetsika avy any amin'ilay soba-kaontinanta. Araka ny fanekeny fa, amin'ny maha-olona izay tsy manana fahitalavitra ao an-tokantranony azy, betsaka kokoa noho ny tany alohan'ilay valanaretina ny fotoana nolaniany tao amin'ny Netflix, ary hazavainy ny fahasamihafany amin'izay atolotry ao amin'ny fahitalavitra frantsay:
Taj Mahal 1989! Mampahatsiahy ny asatànana ilay famokarana: renivola kely sy nofinofy goavana. Toy ny hoe tantara an-tsehatra miloko pôlitika izany ilay izy fa tsy andian-tantara. Ao anatin'ny seho voalohany, henonao ny anaran'i Safdar Hashmi, kaominista milalao tantara, poeta ary mpiantsehatra maty novonoin'ireo mpanohana ny antoko pôlitika Kaongresy elatra havanana tamin'ny Janoary 1989 nandritra ny fampisehoana an-dalambe nataony. Tsy mbola nisy tahaka izany tany anatin'ireo sarimihetsika sy andian-tantara Indiàna. Mihodina manodidina io andry io ny tantara: ny namonoana an'i Safdar Hashmi sy ny fomba fahitàn'ireo mpisehatra fototra amin'izany. Ankolafy roa no misongadina: ireo mihetsiketsika be ara-pôlitika, ary ireo izay maka sisiny amin'ny resaka pôlitika, dia tia tena sy heverina ho tsy ampy fanabeazana ary tsy mandray andraikitra loatra na mirotsaka bebe kokoa amin'ny kolotsain'ny varotra ho an'ny daholobe. Ny tontolon'ny oniversite no fototra iaingan'ilay andian-tantara, ary hita ao ny fikatrohana pôlitika kaominista sy ny ideôlôjia pôlitikan'ny elatra havanana, somary fisainana tompomenakely. Ireny singa rehetra ireny dia mampahatsiahy ahy ny fahatanorako tamin'ny naha-mpikatroka kaominista ahy tany Kolkata. Teo amin'ny faha 14 taonako, nanoratra tononkalo iray aho momba an'i Safdar Hashmi; ary ao anatin'ilay asa soratro farany indrindra “Ilay didimiafina rosiàna” [The Russian Will], nolazaiko ao ny namonoana an'i Hashmi. Araka izany dia marobe ny antony itiavako an'io andian-tantara io!
Saingy ankoatry ny fahatsiarovana ranofotsiny ny fahiny, tsipihan'i Sinha fa misy karazana sarimihetsika sy andian-tantara indiàna vaovao, izay amin'ny ampahany dia lazainy fa an'ireo anarana telo fantadaza: ilay mpamokatra Anurag Kashyap, izay namokatra ihany koa ny andian-tantara India voalohany ho an'ny Netflix, nalaina avy amin'ilay tantara nosoratan'i Vikram Chandra hoe “Sacred Games”, ary avy eo izy lasa mpilalao tao anatin'ny fitiliana izay hitàna ny toeran'i Safdar Hashmi. Toroheviny koa ny hijerena an'i Vishal Bhardwaj, iray hafa mpamokatra sarimihetsika izay ho ny mpamokatra voalohany ilay andian-tantara “Midnight’s Children” ho an'ny Netflix, narafitra avy amin'ilay tantara nosoratan'i Salman Rushdie.
Ny fomba fitantara ahafantarana ny Bollywood, hoy i Sinha manazava, dia mifototra amina fanoherana voamarika mazava misy eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ary ahitàna ireo tantaram-pitiavana novokarina tanaty tontolo mahafinaritra, tao India sy tany amin'ny firenena hafa, ary ahitana ireo hira sy dihy mipoitra amina elanelam-potoana voafaritra… I Amitabh Bachchan, ilay mpilalao sarimihetsika ankafizin'ny maro, izy mibahan-toerana ao amin'ny Bollywood hatramin'ny 1970, no tena ohatra velona maneho tsara an'io karazana sarimihetsika io.
Fa na inona na inona fahasamihafàna eo amin'ny Bollywood sy ny endrika sarimihetsika ara-javakanto, ny zavatra mazava ho an'ny Netflix dia lasa tsena miroborobo sy loharanon'aingampanahy tsy mitsahatra mitombo ho an'ny famokarana votoaty i India: vao avy nambarany ny fivoahan'ireo lohateny indiàna 41 vaovao ho an'ny taona 2021.